Umntu we-5 kwikhaya leholide kwi-STRÖMSTAD
Indlu eyakhiwe ngokupheleleyo kwaye inendlu entle kwindawo enelanga ephambi kolwandle. Wamkelekile kule ndawo yakhiwe ngokupheleleyo, yangoku kwaye itofotofo kwilali yeeholide, enolwandle kunye neendawo ezintle zendalo ezikufutshane nje kwikona. Thatha uhambo lwakusasa uye elwandle ukuze ufumane idiphu yasekuseni, emva koko ube nesidlo sakusasa esimnandi kwenye yeebhalkhoni zendlwana. Ke qala usuku ngokukhetha phakathi kokufumana amava olwandle kunye nokuqubha kwelinye lamanxweme e-Hällestrand, uhambe ngeendlela ezingaselwandle phakathi kweenduli ezingenanto kunye namahlathi epine angaqondakaliyo, umise kwaye ujonge iziqithi zeziqithi kunye nolwandle olubanzi, amava ngeeseyile kunye nezikhephe zemoto ukusuka kuyo nayiphi na indawo okanye thatha ibhasi ukuya kwidolophu yabakhenkethi yaseStrömstad ukuze ufumane ukubethelwa kwesi sixeko, uhambe ngeepiers okanye uhlale kwaye ujabulele kwisofa kwenye yeepaki zesixeko. Indlwana enendawo ephambi kolwandle ikwayindawo efanelekileyo yokuloba, i-kayaking kunye nokuphonononga yonke iNorth Bohuslän. I-cottage ineplani yomgangatho ovulekileyo, othokomeleyo kwaye omnandi obandakanya ikhitshi kunye nesitovu, i-oveni, ifriji / ifriji, isitya sokuhlamba izitya, ifenitshala yasekhitshini, indawo yokuhlala enebhedi epholileyo yesofa (140cm), amagumbi okulala amabini aneebhedi ezitofotofo, enye inama-90 cm amabini. iibhedi ezingatshatanga kunye nebhedi ye-105 cm, igumbi lokuhlambela elinokufudumala okuphantsi, ishawa kunye nomatshini wokuhlamba. Kwigumbi lokulala ngalinye uphuma kwindawo enelanga ye-cottage apho unokonwabela ukutya okumnandi ekukhanyeni kwelanga ngelixa uxoxa ngeziganeko zosuku kunye ne-adventure okanye mhlawumbi wenze izicwangciso zohambo lweentsuku ezizayo. E-Strömstad kukho ukhetho olukhulu lwemisebenzi, ubomi obutyebileyo bokutyela, ukuthenga okumnandi kwiivenkile ezincinci ezisondeleleneyo okanye kutheni ungahlali nje kwaye ujabulele zonke iinqanawa kwindawo yezibuko. Thatha ibhasi ungene kumbindi wesixeko kunye nazo zonke iindawo zokuzonwabisa okanye kwiindawo zokuhlambela apho kukho ezininzi onokukhetha kuzo. Ukuba ufuna ukufumana amava eziqithi kunye nokusingqongileyo kweziqithi, kukho iitshathi ezininzi zesikhephe kunye nohambo lwephenyane lokuhlambela ukusuka kwizibuko elisembindini ukuya kwiziqithi ezininzi zeziqithi ezinjenge. Furholmen okanye iKosteröarna kodwa nakwiNorway engummelwane. Uyakwazi ukuqesha isikhephe okanye i-kayak kuhambo lwakho lokuhlola. Kwabo banomdla kwigalufa, kukho iikhosi ezininzi ezinemingxuma eyi-18 kule ndawo kwaye kufutshane kukho ukufikelela kwinkundla yentenetya. Ngo-2020, ukwakhiwa kwidolophana yase-cottage kuya kugqitywa. Wamkelekile kwindawo entle ngokumangalisayo kwaye entsha kwindawo yaseStrömstad.
Uyilo: ikhitshi elivulekileyo (igumbi lokupheka (umbane), ihood, umatshini wekofu, isitya sokuhlamba izitya, ifriji-isikhenkcezisi), Igumbi lokuhlala/ibhedi (ibhedi egotywayo kabini), igumbi lokulala (2x ibhedi enye), igumbi lokulala (ibhedi enye), igumbi lokuhlambela (ukufudumeza umgangatho) (isitya sokuhlamba, ishawari, indlu yangasese, umatshini wokuhlamba), iterrace(ifenitshala yasegadini, i-BBQ), iterrace